Matongerwo eNyika, 21 Chivabvu 2019
Chipiri 21 Chivabvu 2019
Chivabvu 21, 2019
Mutauriri wekambani inogaya magetsi yeZESA, VaFullard Gwasira, vanoti chirongwa chekugova magetsi kana kuti, load shedding, chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya remagetsi reKariba.
Gweta revasungwa ava, VaJeremiah Bamu, vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavanga vachipinda musangano uyu uye vati vasungwa ava vakatarisira kumiswa pamberi pedare nemusi weChitatu.
Vagari vekuChimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaita vana vavo kuvhurwa zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu edutumupengu Cyclone Idai. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa.
VaLeo Mugabe muzukuru wevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vonetsana nevashandi nekusavabhadhara mari dzavo dzemihoro papurazi ravo reNangadza pedyo neMhangura, pamwe nekuvabhadharisa mari dzekugara papurazi.
Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vanotengesera mumigwagwa yemuguta reHarare nemapurisa eZimbabwe Republic Police vaswera zvakare vachitandanisana, izvo zvinonzi zvaita kuti mapurisa aridze pfuti pamwe nekushandisa hutsi hunokachidza mukuedza kudzikamisa zvinhu.
Vechidiki vebato riri kutonga reZanu PF, vari kuyambira vemabhizimusi vavanoti vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo, vachiti havadi kuzomanikidzwa kutorera vanhu ava matanho anozovarwadza mune remangwana.
Hurumende inonzi yakawana mari iyi kubva kunevanobatsira vekunze, uye inonzi yakanangana nekubatsira vemabhizimusi pamwe nevanhuwo zvavo vanenge vachida mari yekunze kuitira kutenga zvinodiwa mumapka avo.
Vachitaura pakuparurwa kwemusika wekutengeserana uyu, mukuru wesangano iri, VaStan Makwara, vakati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira nekusimbaradza mhuri yeZimbabwe iri mune zvemabhizimisi achiri kusimukira.
Asi munyori mukuru weZCTU, VaJaphet Moyo, vanoti havasati vanzwa nezvekubuda kweZimta musangano guru revashandi vemunyika.
Ratidziro yeKutsigira Ishe Ndiweni Inoitwa Pasina Mhirizhonga muBulawayo
Mumwe wevarongi vekuratidzira uku, VaJosphat Ngulube, vati havana kuzokwanisa kufora mumugwagwa sezvavange vakaronga vachiti vatyira kuti hurongwa hwavo hwaizogona kuvhiringidzwa nevamwewo vanhu.
Kushoropodzwa uku kunoitika zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa mutungamiri weMDC – T, Muzvare Thokozani Khupe, avo vakaudza vatori venhau, kusanganisira Studio7, kuti ndivo vava panyanga dzeMDC yose.
South Africa Yokurudzira Zimbabwe Kuti Ive neMuyananisi Anobva Kunze kweNyika
Vachitaura pakuparurwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa neChishanu, mumiriri weSouth Africa muZimbabwe, VaMphakama Mbete, vakurudzira kuti nhaurirano pakati paVaMnangagwa nevemapato anopikisa dzitungamirirwe namutongigava anobva kunze kwenyika.